गोकुल बास्कोटालाई भ्रष्ट भन्दै पनौतीमा पर्चा छरियो, विद्यालय शिलान्यास नगर्न चेतावनी - Media Dabali
काठमाडौं - पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई नेकपाकै कार्यकर्ताले भ्रष्टचारीको आरोप लगाउँदै काभ्रेको पनौतीमा छ्यापछ्यापती पर्चा बाँडेका छन् ।
सोमबार पनौतीमा एक विद्यालयको शिलान्यास गर्नुअगावै स्थानीय नेकपा कार्यकर्ताले भ्रष्ट आचरणको भण्डाफोर गरौं शीर्षकको पर्चा चोकचोकमा बाँडेका छन् ।
पर्चामा स्कुलजस्तो पवित्र संस्थाको शिलान्यास कस्तो हातले हुँदैछ ? भन्दै अन्य कुनै सांसद, प्रदेश सभा सदस्य वा मेयर ल्याएर शिलान्यास गराउन माग गरिएको छ । पर्चामा दलाल पुँजीपति र भ्रष्टाचारीहरूलाई सामाजिर बहिष्कार गर्नसमेत अपिल गरिएको छ ।
बाँस्कोटा गत वर्ष फागुनमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि सञ्चारमन्त्रीको कार्यकक्षमा ७० करोड रूपैयाँ कमिसन मोलमोलाईको आरोप लागेपछि जिम्मेवारीबाट पदमुक्त भएका थिए । यो काण्डपछि उनी पार्टीमा निकै बदनाम भएका छन् ।
गृहमन्त्री थापा विरुद्ध उत्रिए गोकुल बास्कोटा, दिए यस्तो दनक
अख्तियारले ‘क्लिन चिट’ दिन लागेका गोकुल बाँस्कोटा फेरी मन्त्री बन्दै!
गोकुल बाँस्कोटाको जागिर खाइदिने मिश्रलाई अख्तियारले बोलायो, के हो कारण?
७० करोड कान्ड : अख्तियारले जारी गर्यो यस्तो पत्र, मान्छेको भागाभाग !
७० करोड काण्ड : बाँस्कोटाको जागिर खाइदिने विजयप्रकाश मिश्रले मुख खोले
बुधवार, भाद्र १७ २०७७१०:५१:३७
# गोकुल बास्कोटा # विजयप्रकाश मिश्र